Culimo Galbeed ah Oo Fadeexeeyey Barnaamijka Mareykanka Ee “Hubka Cayayaanada” | Xaqiiqonews
Culimo Galbeed ah Oo Fadeexeeyey Barnaamijka Mareykanka Ee “Hubka Cayayaanada”
Daraasad ka timid jaamacadaha jarmalka iyo Faransiiska ayaa shaki ka muujisay barnaamijka milatari ee Maraykanka ee isticmaala cayayaanka si loo faafiyo fayruusyada hiddesidaha ah oo la sheegay n ay ku xad gudbeen Heshiiska hubka Biyoolojiyada.
Daraasad lagu faafiyey majaladda “Saynis” ayaa ciwaan loogu dhigay Akhlaaqda Biyoolajiyada iyo Xaquuqda aadanaha, daarasaddan ayaa faafaahisay barnaaimjka “Isbahaeysiga Cayayaanka” oo ay horumarisay wasaaradda difaaca Mareykanka.
Daraasadda ayaa farta ku fiiqday dhibaatooyinka bulsho iyo kuwa dhaqaale ee uu sababi karo fulinta barnaamijkan oo halis ku ah deegaanka si guud.
Barnaamijkani ayaa la sheegaa in uu socday tan 2016-kii, waxeyna wasaaradda DifaacaPantgonka ku bixisay dhaqaalo gaaraya 27 milyan oo dollar.
Igor Kirilov, oo ah taliyiha ciidamada Ruushka, ee xagga difaaca ayaa sheegay Khamiistii in culimada Mareykanka ee ka shaqeeya dalka Georgia ee Xaruntooda tahay Aleksevska) ayaa tijaabiyay kiimikada sunta ah ee halista ku ah dadka iyo deegaanka(hubka Biyaloojiyada)
Wasaaradda Gaashaan-dhigga ayaa soo gabagabeynaysay natiijadan iyada oo sal looga dhigayo falanqeyn lagu sameeyay waxyaabaha uu daabacay Wasiirkii hore ee amniga ee dalka Georgia, Igor Giorgadze